लामो दूरीको यात्रामा लगाइएका नयाँ नियम, सबैले जानिराखाैँ ! – Life Nepali
लामो दूरीको यात्रामा लगाइएका नयाँ नियम, सबैले जानिराखाैँ ! कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका माझ सार्वजनिक यात्राका बारेमा थुप्रै नयाँ नियम ल्याइएका छन्। कुनै नियम यातायात व्यवसायीको जिम्मामा राखिएका छन् भने कुनै नियम यात्रुहरू स्वयंले पालना गर्नुपर्नेछ। सरकारले असोज १ गतेदेखि लामो दूरीको यातायात खोल्ने निर्णय गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको कोभिड-१९ प्रकोपभर लागु हुने सार्वजनिक यातायात सञ्चालन निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छ, जसमा गर्न हुने तथा नहुने विषयहरू उल्लेखित छन्।
Previous एकाबिहान सम्पुर्ण देशबासीहरुका लागि आयो अत्यन्तै जरुरी सुचना !
Next नेपालमै पाइन्छ अब यति सस्तो पल्सर बाइक ! तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस् !